Ninkii lagu helay dambiga dilkii alla ha u naxariistee Nabaddoon Walloore oo maanta lagu qisaasay Garowe. – Radio Daljir
Ninkii lagu helay dambiga dilkii alla ha u naxariistee Nabaddoon Walloore oo maanta lagu qisaasay Garowe.
Garowe, Oct 22 – Waxaa maanta duleedka magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland lagu toogtay gacan-ku-dhiigle horay magaalada Galkacyo ugu dilay nabadoon caan ahaa lagu magacaabi jiray Nabadoon Xasan Xuseen Maxamed ?Walloore?.
Ninkaan maanta la qisaasay ayaa dhawaan maxkamadda magaalada Garowe ku xukuntay dil toogasho ah kaddib markii lagu helay dambi ah in uu dil ula kac ah u gaystay rabbi ha u naxariistee nabadoon Xasan Xuseen Maxamed ?Walloore?, siddeeddii bishii Aug ee sannadkaan.
Goobta dilkaasi ka dhacayey ayaa waxaa goob-joog ka ahaa mas?uuliyiin kala duwan oo ka tirsan hay?adaha dawliga ah ee Puntland, gaar ahaanna garsoorka iyo mas?uuliyiin heer gobolka ah oo uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Nugaal.
Guddoomiyaha Cabdi Xirsi Cali ?Qarjab?, oo markii la qisaasay ninkaasi u waramay Radio Daljir ayaa sheegay halkaasi in ay u tageen sidii ay ula socon lahaayeen fulinta xukunkaasi maxkamadeed.
Ma ahan qofkii ugu horreeyey oo qof lagu helay gaysashada dil-qorsaysan ay maxakamadi ku xukunt dil-qisaaseed, hase ahaatee waxaa aad u yar helitaanka dhagar-qabayaasha falalka abaabulan gala, marka loo eego badnida falal dambiyeedyada noocaan ah ee ka dhaca Puntland.